ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အဆိုးရွားဆုံး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ →
မြန်မာဒုက္ခသည်များ ယူအန်ကဒ် ကိုင်ဆောင် ထားသော်လည်း ဖမ်းဆီးခံနေရဆဲ
မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု အထောက်အထား စာရွက် ရရှိထားသူတွေကို ဖမ်းဆီးမိတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထောက်ခံ ချက်နဲ့ ပြန်ပြီးတော့ လွတ်ပေးသင့်တယ်လို့ ဆူဝါခမ်းရဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ မူဟာမတ် ချအ်ဟနီ အဘူဒူလာ က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
Posted on March 29, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.